ABUU MANSUUR wuxuu i xasuusiyay Hong Xiuquan - Caasimada Online
Home Maqaalo ABUU MANSUUR wuxuu i xasuusiyay Hong Xiuquan
ABUU MANSUUR wuxuu i xasuusiyay Hong Xiuquan
Maanta markaan ku arkay sawirka kore bogga caasimada.com waan rumaysan waayay. Abuu Mansuur wuxuu la sawiran yahay safiirka dowladda Ingriiska u qaabilsan Soomaaliya. Sida sawirka ka muuqato, safiirka waxaa ka muuqdo cabsi wajigiisuna wax farxad ah ma saarna. Dhinaca kale, Abuu Mansuur, waxaa ka muuqdo farxad iyo dhoolla-caddayn lagu muujinayo raalli ahaansho iyo soo dhaweyn.
Sawirka ayaan aad u eegay muddo, waan wayneeyay oo yareeyay, waan soo dhaweeyay oo aan fogeeyay. Waxaan isku dayay inaan akhriyo waxa sheekh Mukhtaar qosolkaan ka keenay. Waxaa i horyimid isagoo aaminsan qofki sidaasi gaal ugu qoslaa inuu murtad yahay xukunkiisuna qoor-goyn yahay. Waxaa isoo muuqday isagoo qori jeeniqaarsan oo leh “wax ka yar inaan Islaam Alaska geyno nama deeqaan”. Waxaa isoo baxay sawirkiisi isagoo qori horyaallo oo inta canug shan jir ah AK47 u dhiibay leh waa wiilkayga oo aan jihaadka u diyaariyay. Waxaa isoo baxay isagoo horkacayo caruur aan qaangaarin oo inta dagaal galiyay meydkoodi uu bannaan kaga yimid.
Waxaan is iri, markuu intaas oo dhib ah gaysanayay muxuu rabay? ma kurisgaan, xukun iyo darajo iyo jako mise imaanka ayaa ka run ahaa? Haddii uu aminay inuu horay u khaldanaa muxuu uga xishoon waayay inuu wuxuu sanadka ka hor u arkayay gaalnimo uu isagu maanta u tafaxayto? Waxaa markiiba igu soo dhacay Hong Xiuquan oo ah tusaalaha ugu fiican ee aan ka baran karno sida ruux kursi doon ah aysan waxba u xirin iyo sida bulsho wayta hadba iyo jeer ay u hodaan.
Hong wuxuu ku dhashay dalka Shiinaha kowdi Janaayo 1814’ki. Qoyskiisu wuxuu ahaa ree tuulo sabool ah oo beero tabcado. Hong wuxuu lasoo baxay firfircooni iyo ragganimo yaraantiisaba. Wuxuu jeclaaday waxbarashada waalidkiisna waxay u hureen waxay heli kareen oo dhan si inta wax u barto baladka u galo iyaguna gadaal oogu baxsadaan. Hadafkiisu wuxuu ahaa inuu marki uu iskoolka hoose dhammeeeyo uu ku baaso imtixaanka dowladda.
Waqtigaas dhammaan shaqaalaha rayidka ah ee doonayo inay dowladda u shaqeeyaan waxaa laga qaadi jiray imtixaan aad u adag qof aan ku baasinna xil sare iyo mid hoose toona ma qaban jirin. Hong imtixaanki waa uu ku dhacay. Dhowr jeer ayuu ku noqday waase baasi waayay. Qoyskiisi waa sii wadi waayeen inay waxbarasho kusii hayaan ilaa uu ka baaso sidaa awgeed waxay ku yiraahdeen soo laabo aad beerta noo tabacdide taasoo Hong murjisay. Xariiftan ka dib meel ayuu ka helay deeq waxbarasho taasoo u suuragalisay inuu qaato shahaado uu macallin ku noqdo laakiinse imtixaanki dowladda waa uu hollin waayay.
Hong qalbigiisa kama bixin inuu dalkiisa madax sare ka noqdo jid uu marana waa uu waayay. wayadaas waxaa aad u faafayay masiixiyadda oo guumaystihi ree Yurub furaha ay dadka ku qabsadaan u ahayd. Waayadaas waxaa Shiinaha gaaray wadaaddo ka socday kaniisado oo masiixiyadda faafinayay. Hong waxaa u muuqatay fursad qaali ah oo dadkiisa ku hoggaamin karo maqaam sarana uu ku gaari karo. Waxaa uu sheegtay inuu yahay NABI CIISE WALAALKI ka yar loona soo diray badbaadinta Shiinaha.
Dabcan sheegashadiisa ree Yurub ma rumayn mana soo dhaweyn oo diintoodi ayay xadgudub ku ahayd laakiin malaayiin dadkiisi ah ayaa rumeeyay kaas ayuuna qasadkiisu ahaa. Hong wuxuu gobolkiisi ka yabyabtay boqortooyo uu ku hoggaamiyo dadka uu nabiga u noqday. Boqortooyadi Shiinaha ayaa arrintaas ka carootay dagaal ayaana sidaasi ku qarxay.
Dagaalki maalintaas curtay wuxuu noqday dagaalki ugu dheeraa ee dhaco qarnigi 19aad. Wuxuu socday 14 sano oo xariir. Waxaa ku dhintay dad lagu qiyaaso 20 ilaa 70 milyan oo qof. Qiyaasaha qaar ayaa gaarsiiyo 100 milyan. Tiro intaas aad ooga badan ayaa ku barakacday. Dadka isaga u dirirayay waxay u dagaalamyeen faafinta diintoodi masiixiga ee cusub taasoo sida iyagu u arkayeen Nabi Ciise walaalki ula yimid isagoo noolna dhex joogo. Waxay hureen naf iyo maal waxayna goobaha dagaalka ka dhigeen wacdarooyin taariikhda galay. Laakiin isagu waa uu ogaa inuu Hong yahay oo uusan ahayn nabi iyo Ciise walaalkii toona. Hadafkiisu wuxuu ahaa inuu mansab iyo maqaam sare helo waa uuna gaaray taariikhdana waxaa loogu qoray mid ka mid ah labaatanki qof ee Shiinaha ugu saamaynta badnaa.
Haa isagu waa uu gaaray hadafkiisi laakiin tobonnaanka milyan ee u dhintay maxay gaareen? ma ogaayeen hadafkiisa runta ah haddise ay ogaan lahaayeen maxay fali lahaayeen? Arrintaan Hong kuma eka ee wajigiisu waa kan dhabta ah ee ragga xukun doonka ah. Haddii imtixanki horaba uu ku baasi lahaa barasaab iyo guddomiye dagmo isagoo ku qanacsan inuu dhiman lahaa laga yaabo, ama si nabad ah ayuu ku gaari lahaa maqaam sare. Markise uu waayay sidii nabadda ahayd wuxuu isticmaalay siduu islahaa waxbaad ku heli kartaa. Inta badan dadka hoggaamiyo kacdoonnada waa un sidaas. Waxaase farxad ah in Abuu Mansuur ku hormaray xabbad wax ku dooniddi haddana uu go’aansaday inuu si nabad ah wax ku raadsado. Waxaanse ogayn haddii uu waayo meesha uu ka bus kicin doono!
Taariikhu way soo noqnoqon Hong oo kalana dhammaan maayo. Waligeed koox iyo shaqsiyaad kursi doon ah oo daahirka daacad ooga ek waa jiri shacab dhaga la’ oo qayladi yeertaba u dhintana wuu jiri doona.
kala soco: [email protected]